RASMI: Barcelona Oo Maamulka La Liga Si Rasmi Ah Uga Dalbatay In Loo Ogolaado Saxiixa Badalkii Ousmane Dembele Iyo Rivaldo Oo Xidig Kula Taliyay. - Gool24.Net
RASMI: Barcelona Oo Maamulka La Liga Si Rasmi Ah Uga Dalbatay In Loo Ogolaado Saxiixa Badalkii Ousmane Dembele Iyo Rivaldo Oo Xidig Kula Taliyay.
Kooxda Barcelona ayaa dalab rasmi ah u gudbisay maamulka horyaalka La Liga si ay ugu codsadaan in la siiyo doorasho khaas ah si ay suuqa kala iibsiga oo xidhan ula soo saxiixan karaan ciyaartoy badal ugu noqon kara Ousmane Dembele.
Sharciga FIFA ayaa ogol in kooxaha loon ogolaan karo in ay saxiixyo samayn karaan haddii shuruudo gaar ah la helo, waxayna Barca buuxisay shuruudihii looga baahnaa in ay kooxi ciyaartoy la soo saxiixan karto suuqa oo xidhan.
Si ay kooxi u samayso saxiix ciyaartoy suuqa oo xidhan waxaa jira talaabooyin la qaado, waxayna hadda Barca si rasmi ah u bilawday dhaqan galinta sidii ay ciyaartoy kula soo saxiixan lahayd u badali kara Dembele.
Qodobka kowaad ee kooxda Barcelona looga baahnaa waxa uu ahaa in ay marka hore si rasmi ah u soo cadayso natiijada qaliinkii uu Ousmane Dembele maray ee lagu cadeeyay in uu muddo 6 bilood ah garoomada ka maqanaan doono.
Arintani waxay bilaabaysaa talaabooyin is xiga oo ay Barcelona ku marayso si ay dariiqa saxiixa ciyaartoy ku banaysato waxayna maamulka La Liga u dirtay natiijada qaliinkii iyo warbixinta caafimaad ee Ousmane Dembele.
Waxa kale oo xigta in ay Barcelona warqad rasmi ah u qortay maamulka La Liga si ay u codsadaan in badalka Dembele ay la soo saxiixdaan iyada oo suuqu xidhan yahay.
Hadda waxa uu maamulka La Liga haystaa 72 saacadood gudahood oo ay go’aan kaga gaadhayaan dalabka rasmiga ah ee ay Barcelona ku soo doonatay ansixinta in ay badalka Dembele la soo wareegaan.
Marka uu maamulka La Liga ansixiyo ama diido codsiga rasmiga ah ee Barcelona waxaa la ogaan doonaa haddii ay fursad u heli doonaan in ay ciyaartoy la soo wareegaan.
Haddii maamulka La Liga uu 72 ka saacadood ee soo socda go’aamiyo in ay Barca la soo wareegi karto badalka Dembele waxay markaas kooxda Camp Nou ka dhisani haysan doontaa 15 maalmood oo ay ku la soo saxiixdaan badalka Dembele iyada oo haddii kale ay fursado seegi doonto.
Haddaba xidigii hore ee kooxda Barcelona ee Rivaldo ayaa xidiga dalkiisa ee Willian Jose ugu baaqay in uu ka faa’iidaysto fursada ay Barcelona ku doonayso saxiixa badalka Dembele kadib markii uu ogaaday in Barca ay xiisaynayso Willian Jose oo Real Sociedad ka ciyaara.
Waxa uu Willian Jose ka mid yahay gool dhaliyaasha tayada fiican ee ay Real Sociedad ku soo tiirsanayd xili ciyaareedyadii la soo dhaafay intii ayna saxiixyada badan samayn.
Si kastaba ha ahaatee, waxay Barcelona hadda ka war sugaysaa in ay go’aan ka hesho maamulka La Liga haddii loo ogolaan doono in ay suuqa oo xidhan la soo saxiixdaan badalka Dembele.